Pike - perch omele umndeni - ukubamba zonke amaphupho Angler ka. Ngokwesilinganiso sifinyelela ubude ngamasentimitha kuze kube ayisikhombisa Isisindo amakhilogremu amane kuya kwayisithupha. I indima ebalulekile eyadlalwa inhlanhla ekudobeni ngenela choice esifanele ekubambeni walleye ebusika, imisinga enamandla ngokukhethekile. Futhi lokhu kufuna ukwenziwa oyifunayo - kwanele enzima.
Naphezu kweqiniso lokuthi le nhlanzi litholakala cishe kuyo yonke machibi lapho amanzi ehlanzekile ngezinye izikhathi ukuthola yayo yokupaka ebusika kuyinto kahle kulula. Isizathu siwukuthi walleye ngokuvamile ziyashintsha. ezindaweni Abaningi bazizwa njengodade enamadwala nasogwadule olunesihlabathi embondelene in ukujula snags eliyimfuhlumfuhlu noma Snag emgodini nezinye izingxenye esilungele ukuqamekela kwakhe. Phezu kwemifula, isibonelo, kwi iVolga kanye Kama, walleye ebusika uvame ebibanjelwe yinqwaba ibhuloho nezindonga ezivimba amanzi eduze angajulile.
izinhlanzi ezincane noma naphakathi uncamela ubuthe imihlambi, kodwa zezinhlobo ezinkulu ezifana isizungu. Ngokuvamile lokhu Ukudoba perch omele - hhayi kuphela catchability ukubhekana for ekubambeni walleye ebusika, kodwa futhi search asebenzayo izindawo lapho uhlala. Ngokuvamile zifiki ukudoba kuphela izingqimba phansi. Kodwa lena indlela engalungile. Le nhlanzi kuyinto kakhulu sensitive, umoyampilo, ngoba ngisho owumthelela elincane amanzi ayegcwele kubo avame anamathele jet.
Walleye ebusika ukuqala ukubamba ne yesithwathwa kuqala futhi pervoledyu. Kwakuphakathi nalesi sikhathi izinhlanzi namanje egcwele amandla, umhlambi ngenkuthalo esihamba phansi kusesho zezinyamazane. Isizini engcono kakhulu isikhathi inyanga eyodwa ngemuva ukufakwa koqweqwe ice. By the way, abadobi ungakhohlwa mayelana umqondo ezifana "okhathele" womthombo. Ngakho uma aphume ezinye umzingeli imbobo liye wadonsa impango, bese eluma hhayi, kuwukuhlakanipha ukuba alinike ihora 'Ukuphumula' kwabo. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ukuthi kuwufanele ukuzama futhi.
Okudingekayo ukuze Tackle
Ukuze kodobo perch ebusika kufanele bakhethwe, ngokusekelwe izici ezithile. Lokho-ke kuyisihluthulelo ukudoba yimpumelelo. igiya okunjalo ekubambeni walleye ebusika, njengoba izinduku ukudoba, kumele ifakwe isibambo ukhululekile futhi esondweni okuthembekile. Kubalulekile futhi ukuba shestik kwaba isikhathi eside futhi kanzima ukuze libhubhisa definition. Ukudoba umugqa ezidingekayo ukuthatha ukushuba amamilimitha angu 0.2 kuya 0.4 ne ukunwebeka ezimbili cm imitha ngalinye. Bagencetisa ukuba ukubhekana for ekubambeni perch ebusika akhethiwe kuye ngokuthi idivayisi iphinde izinduku ngesisekelo esikuthandako. Ngokuphathelene leash, kuba kuleli cala, kusho izazi, ayidingeki.
Ebusika, Zander bakulume lolo, engenalo nelincane ukuma noma umbala. Central nokudoba yimpumelelo izimo ezine: nini futhi kuphi isicelo izicupho ethize futhi yini ukuma nosayizi ukukhetha kuleli cala. Ukuqinisekisa kokubamba izinhlanzi eziningi ku arsenal udinga ukuba lolo nokudlala yekwentiwa gvozdyaschego izinhlobo letingemasayizi lahlukene. Nokho, futhi umbala noma decor musa ukudlala indima ebalulekile. Ngakho-ke spinners akhethiwe ezisuselwa ngabanye. Kodwa okubaluleke kakhulu - kumele nesisindo amagremu lemine. Lona isidingo esibaluleke kakhulu kule igiya ukuze ekubambeni walleye ebusika.
Ukudoba impumelelo ice emfuleni kuncike ngokuyinhloko indawo. Ngokuvamile e perch ebusika odla hillocks kwamanzi - okubizwa ngokuthi inkaba, sise olujulileyo nge umehluko phakathi kwamamitha amane anamakhulu amahlanu.
Kuyinto kulezi amagquma ukubamba lokhu umhlaseli. I balancer isetshenziswa njengoba lolo noma ukuyengwa. Catching walleye ku iqhwa iVolga - usesho zezinhlanzi asebenzayo, ephelezelwa izimbobo imishini njalo. Ukuthola ukujula lapho umhlaseli kuwufanele, ungakwazi, ezihambayo kulelizinga, ukudoba endaweni enkulu ngokwanele.
Ngemva inhlanzi emhlophe eshiya izindawo angajulile emfuleni, Pike futhi ngesikhathi ukujula evamile. Ngo gluhozime lapho umoya-mpilo emanzini incane, kungase awela catalepsy. Ngalesi sikhathi izinhlanzi lokho okudlayo akusondeli, kungaba phezu iVolga akazange ukuluma.
Ukuze perch phezu Kama
Ukudoba emfuleni iqala esikhathini lapho iqhwa anele kakade. Mangisho ukuthi ukudoba ubusika phezu Kama engengaphansi ejabulisa ngaphezu ehlobo. Okokuqala, kubalulekile ukuba bathole indawo ekahle yokuhlala. Lona Isimo esibaluleke kakhulu ukuze impumelelo ekuzingeleni. Okwesibili, kulesi sikhathi sonyaka umhlaseli kunalokho "olukhuni": akudlayo ngempela kahle. Ngakho-ke, kumelwe sikhethe ngokucophelela igiya ukuze ekubambeni walleye ebusika eMfuleni Kama futhi lolo ukuthi uzokwazi ukuyenga.
Ngaphansi ice le ummeleli wokuqala percid bite ezinhle spoon encane efana nezinhlanzi ezincane. Hook udinga unamathisele obuncane isipanji. Ngokuqondene ngenela, ukudoba perch ebusika ngezandla zakho, ungenza lolo elula, kuhlomisa ke ikhoyili provodochnoy. Isiswebhu singesehhashi sokudoba Kama kangcono ukusebenzisa kunalokho ezinzima ubude esuka ngamasentimitha amabili mahlanu. Lokhu kukhetha alichaza yokuthi ngesikhathi podsekaniya hook kumelwe umba ujule emlonyeni izinhlanzi. A ikhanda futhi Udinga ukukhetha nokunwebeka - ukuze ukumelana kobukhulu spinners hhayi ehle degrees engaphezu kwamashumi amabili nanhlanu. Kungenxa nalesi imishini ugijima Kame the best ukudoba walleye ebusika.
Tackle, enziwe ngezandla zakhe, akuve kuvamile ukuba phakathi abalandeli ukudoba ice. Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo lo lolo, ezifana sprat. Abaningi ukusetshenziswa Kuphakathi kokuthi uyaphila noma esitolo-uthenge, ngokuvamile simisiwe. Kubalulekile ukuthi ingakanani le izinhlanzi kungekho amasentimitha angaphezu kwayisihlanu, futhi isidumbu saso kungaba ngempela ukubhekana nezimo ezinzima. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi angawi ngapha hook ukubhekana for ekubambeni walleye. Ebusika, catch sprat ngendlela elandelayo: it is kwaphoqa ngomsila kangangokuthi wayengakwazi inhloko nomzingeli. Okungenani indlela eyamukelekayo ukupakisha kuyo a umkhumbi. Ngokwengxenye enkulu, lolo fresh ingadlali indima, into esemqoka - it cha uye wawa. Kwezinye izifunda, esikhundleni sprat bekulokhu asebenzisa ngayo ngokuphumelelayo nezinye gazinga uzkotelaya, isibonelo, lifiphele.
Abaningi yayo ngamakhasimende ngokuyinhloko Pike. Kodwa eqinisweni ngayo umbono elihle tackles for ekubambeni walleye. Ebusika, kuba catchability ngokwanele kusukela ice ukubamba perch ngisho burbot. Nokho, akukho izinguquko eziphawulekayo ukuklanywa tackles kakhulu ekubambeni izilwane ezidla ezinye singanikezwanga. Zherlitsy catch perch kulo ebusika. Ngokuvamile phakathi nqabela-le nomzingeli uhlala ezansi, ngakho-ke kufanele kube ejulile ukubamba lolo bukhoma kuzo - minnows, perch futhi isiphika.
Zherlitsy kangcono ukufaka ezindaweni lapho phansi sendawo eziguquguqukayo, futhi eduze Snag noma snags. Lapho okuhlabayo ezimbi kufanele ziqale ngenkuthalo ukucinga inyamazane, ufaka ngenela. Lokhu nakuba isikhathi esiningi, kodwa ukuthola endaweni lapho umhlambi iyobalethela nibambe yimpumelelo.
Homemade ebusika donk ku perch
Kuyaziwa ukuthi ubuholi baseLimpopo bese walala phezu phansi igiya kusukela qhwa nzima kakhulu kunokuba ngesikhathi ukudoba ehlobo. Ngakho-ke, abantu abaningi bazama ukukwenza ngezandla zakhe, ukuze nokwandisa ukudoba kungenzeka, donk eyenziwe ngaphansi kwakhe. Kulesi ebusika phansi ngenela for ekubambeni perch kufanele inikezwe sinkers ezimbili - ukukhanya, enesisindo ezingengaphezu kweziyisishiyagalombili amagremu futhi yakhelwe ukuqhakaza ukusakaza futhi usinde - kuya ku-30 g, wasebenzisa ezansi kwesigubhu. Zombili lezi zingxenye kumele kube imishini ezihambayo ukuhambisa ngokukhululekile lesikafula ukuze izitobhi yayo. Njengoba yokugcina lingasetshenziswa phambili zithutha noma carbines kokuba fastener.
Ngokuvamile leash donk inamathela ezintathu - omunye ekupheleni Imbongolo, ngezansana nje kwenqaba sinkers nge isisindo kancane, kanti lawa amanye amabili - e ezingamashumi ayisikhombisa ngamasentimitha ngenhla ngesivalo yayo. Tackle efakwe iqhwa spacers, avame - ku wire iflaya. Basuke kwaphoqa ungene isiswebhu ukugcina enamandla Zander hudula ke emgodini. The main ngokuningiliziwe ikhanda - ikhoyili entwasahlobo - ogibele umnikazi esebenzisa ukudla. Ubukhulu bayo yangaphakathi kumele sibe ngaphezu amamilimitha angu ezintathu.
Ngo Anglers kakhulu ukusebenzisa ikhanda eyenziwe iziphethu, noma uhoxile inhlabamkhosi mechanical clockwork amathoyizi. Ekupheleni kwalo soldered ikhanda indandatho okuyothi ngalo line ukudoba sidlulile.
Enye Ukuphela isandla enamathiselwe isiswebhu. LaseNodi kuyaqina kungase kushintshwe yokuhamba roller iraba ne wire lebracket isiswebhu. Endabeni abukhali Ukulunywa indandatho, bawabulala indandatho kubangela samopodsekaetsya izinhlanzi.
Ukuqoqa okuzenzela ebusika donk emva ukudoba can noma ipuleti ehlukile, noma motoviltse esisogwini isibambo senduku lokudoba. Anglers abanokuhlangenwe nakho igiya is disengaged kusukela umugqa oyinhloko, kodwa kuphela uma lapho idilimitha imithwalo esindayo basebenzisa nge carbine ukuyona.
Izinduku Ngezansi: idivayisi iphinde lokusebenza
Njengoba roach ebusika ubanjwe on JIG? Indlela yokwenza JIG kuya roach?
Flavour ukudoba: ukubuyekeza nempendulo. Activator bite
Izinwele ezithweswe iziqu: izici
Isikhungo sokuzijabulisa, i-yacht club "Rubin". Ulwandle lwase-Andreevsky Lake, ezemidlalo, induduzo nobudlova
Indlela yokutshala zinhlayiya kasawoti kanye nezinye izinto?
Amajazi mink Blackglama ( "Blekglama"). Mink noboya coat Blackglama: kanjani ukuhlola ubuqiniso?
Indlela ukuqeda ukuminyana izindlebe: ekwelapheni ezahlukene izimbangela ukungakhululeki